Ibhola leGolf elitsha: Khangela oko Kufika kwii-Pro Shops
Midlalo Gear & Equipment
Iibhola ezintsha zeGalofu kwiMarike (okanye ukuza kungekudala) ukuba uya kuzama ukuzama
Yintoni entsha kwihlabathi leebhola zegalufu? Gcina umkhondo weebhola zegalufa zamanje ezibonisa izitolo zegalufu, okanye ukuza kungekudala ukugcina amashalofu. Siyabalawula ibhola ejoliswe kuwo onke amanqanaba olwazi kunye neebhola kuzo zonke ixabiso lentengo yeemarike. Iibhola zegalufa ezitsha zivela phezulu: Xa siva malunga nalo, uva ngako.
Nazi iijubane kunye neebhola zegalufa ezitsha kwiimarike:
Iibhola ezintsha ze-golf ze-AVX ezivela kwi-Titleist zijoliswe kubadlali begalufu abafuna umgama kodwa bazizwe bezithoba kunye nokulawula amanqaku. Inomzila ogqityiweyo, ophantsi odlalwa ngabadlali abangcono, kunye ne-speed speed, low-compress core.
Iibhola ze-AVX ze-Titleist zivela ezimhlophe kwaye ziphuzi, kwaye zenzelwe ukuvelisa ezantsi kakhulu iiklabhu zemidlalo emide.
Iibhola ze-AVX zafumaneka eUnited States ziqala ngo-Apreli 23, 2018, ngokukhululeka emhlabeni wonke kuza kamva ngonyaka. I-MAP yi-$ 48 nganye. titleist.com
02 ngo 10
I-Titleist Tour Soft neVelocity Models
Iibhola zeGolfe Soft zeGolfe Soft ezivela kwi-Titleist. Inkampani yeAcushnet
I-Titleist iphume ngeempawu ze-2018 zeVelocity iibhola zegalufa kunye neebhola ze-Golf Soft zebhola. Njengoko amagama eebhola zegalufu zibonisa, i-Tour Soft ijoliswe kubagadi begalufu abagxila ekuzivekeni, iVelocity kwiigalufu ekukhangela umgama omde. Ngokuthethileyo, iTour Soft iya kukhethwa ngabadlali begalufu ababhetele, i-Velocity phakathi kwe-middle-and-upper-handicappers.
Iibhola zeTour Soft ziza kumbala omhlophe kunye ne-high-optic yellow and have MAP of $ 35.
Iibhola ze-Velocity ziza kwiimpawu ezine: i-white white, i-VISI-White (i-high-visibility version), iVelocity Orange kunye neVelocity Pink. I-MAP yebhokisi ye-12 Velocity ibhola i-$ 27. Ukutyelela i-titleist.com ngolwazi olungakumbi.
03 ngo 10
I-Snell ye-MTB Black kunye ne-MTB Red Golf Balls
Iibhola zakutsha ezivela kwi-Snell Golf ziyimodeli ye-MTB emnyama kunye ne-MTB, ekhutshwe ngoJanuwari 2018.
I-MTB Black ibhola elingu-3 elinomzekelo we-360 umbala kwiphepha le-urethane. Ukuthelekiswa nebhola yase-Snell ye-MTB, i-MTB Black ine-core-compression core core-7, leyo inkampani ithi i-lowers ihlwitha umqhubi ukukhulisa umgama.
I-MTB Red ibhola engama-4 ene-338 dimples. Unemvakalelo ehambelana nomqhubi kunye nexesha elide lensimbi, kodwa igcina iqondo elithile livakalelwa kwaye liphezulu elinezixhobo eziphuma kwiimfono ezifutshane kunye neenxa zonke eziluhlaza.
I-MSRP yi-$ 31.99 yebhokisi ye-12; I-MTB Red iluhlaza okongezelela kumhlophe. (snellgolf.com)
Bridgestone Tour B Series
I-Bridgestone's Tour B330 umgca weebhola zegalufa ibe yiyona nkampani yeebhola kwiibhola iminyaka emininzi. Hayi kwakhona. I-Bridgestone Golf, eqala ekuqaleni kuka-Oktobha 2017, ithatha indawo yeB330 kunye neebhola ezintsha zeT Tour B kwiimodeli ezine.
I-Tour BX kunye ne-Tour B XS ziibhola ze-hand -appersers eziphantsi kwaye zithatha indawo yeB330 kunye ne-B330-S ngokulandelanayo. Nge-cover yererethane encane (xa kuthelekiswa ne-B330) kunye nokuphucula i-aerodynamics, iBridgestone ithi ezi bhola zinikeza ukuphucula kwi-greenside spin, ukuziva kunye nomgama ngaphezu kwabo baqala ngaphambili.
I-Tour B RX kunye noKhenketho B RXS iibhola zegalufa zijoliswe kwi-middle-to-low handicap abagadi begolfu abafuna umzila ogqithiseleyo kunye nomgama omde.
Yonke imizekelo emine kwi-Tour B Series iqala ukuthengisa ngo-Oktobha 2, kunye ne-MSRP ye-$ 45 / nganye. bridgestonegolf.com
2017 I-Srixon Q-Star
I-Srixon Golf ibiza ibhola layo le-2017 ye-Q-Star ibhola yegolfu "... ibhola yegalufa kubadlali abafuna ukudlala ngokukhawuleza kwi-design-durable 2-piece."
Ithetha ntoni le nto? Ibhola iquka ezinye ze-tech ye-Srixon efunyenwe kwiibhola zotyelelo lwe-brand, kubandakanywa nendawo engaphantsi kwe- compress , "i-Spin Skin" yokubhinqa kunye nomzekelo wokuhlaziywa.
Kodwa kuza kwi-2-piece build structure kunye nocingo olude olude. Iibhola ezintsha ze-Srixon Q-Star ziyafumaneka kwiintengiso ngomhla wama-Agasti 18, 2017, kunye ne-MAP ye-$ 24.99 nganye. Ziza zimhlophe okanye ziphuzi. Bona i-srixon.com ngolwazi olungakumbi.
06 ngo 10
Sika ibhola yegolfu eblue. Gweba iGalofu
Ukunquma iGalofu yinkampani yaseCalifornia eyenza, iimarike kwaye ithengisa iibhola zayo zegalufa eziya kubathengi. Ukuqhawula umntu ophakathi kukuthetha amanani aphantsi.
Kwaye ibhola yokungena kwiCandelo leGalofu, i-2-piece Cut Cut, ithengisa kuphela i-9.95 yezigidi ngeyodwa. Kukho i-Cut White, ibhola elingu-3, ​​i-$ 14.95 / eziliqela.
Ngoku kufika i-Cut Blue, i-4-piece, ibhola yegolfu e-urethane enenani eli-$ 19.95 kwi-website yeCandelo leGalofu (cutgolfco.com).
"Abagadi begolati bayazi ukuba ngoku kukho iindlela ezininzi zokukhetha iibhola zegalufa zekhwalithi kumgangatho okhuphisanayo," watsho uMsunguli weSiseko seGolfu uSam Uisprapassorn. "Into esiyibonile ngebhokisi leNgqungquthela yaseKirkland yilapho abagadi begalufu bafumanisa ukuba kukho ezinye izinto eziyingozi apho, kwaye akudingeki ukuba bakhokhe i $ 50 ngeyodwa."
07 ngo 10
I-Srixon Q-Star Tour
Ibhola leGrafon ye-Srixon Q-Star ibhola yegolfu ijoliswe kubagadi begalufu ngokukhawuleza ngokukhawuleza, kodwa bafuna ibhola yegalufu ye "Tour-caliber". Ithetha ntoni le nto? Ibhola enika ukuqhutyelwa komsebenzi kunye nokulawulwa kwe-greenside kubonakala kuphela kwiibhola ezijoliswe kwi-golf-swing speed speeders.
I-Srixon igxininise ekunciphiseni ukunciphisa ukunyanzeliswa , okukunceda ukulinganisela umlinganiselo wokunyuka kusenza kube lula ukusebenza kakuhle. Ngaphezulu kweso sibopho se-urethane kunye ne-Srixon's "Spin Skin" yokugubungela okubonelela ngeyona nto ilula kwaye ilawulwa ngakumbi.
Uninzi lweebhola ze-Srixon zinikezwa ngemibala emininzi, kodwa i-Q-Star Tour iya kumhlophe kuphela. Ifikelela kuma-venkile eNtshona Melika ngo-Apreli 14, 2017, kunye ne-MAP ye-$ 29.99 nganye. srixon.com
08 ngo 10
Iibhola zoQeqesho zeSci-Core
Iibhola ze-Sci-Core zenzeke kwimikhono yesithandathu. I-NuPro Golf Products nge-Facebook
Ufuna ukuqhuba igorfu kodwa unayo indawo yokwenza njalo? Mhlawumbi ucinga ukuba iibhola zenzelwe ukuhambisa imida emifutshane kwaye zakhiwe ukuphepha ukwenza umonakalo kwipropati. Ngoku kukho ukungena okutsha kulolu hlobo oluthiwa yi-Sci-Core (inkampani ichaza zonke iifowuni - I-SCI-CORE).
Iibhola ze-Sci-Core zoqhelwano zakhiwa ukuphuma kuma-yards angama-100 ekubalekeni, kodwa zombini ziphindaphinda zivakale ngeebhola zegalufa zegolide ngelixa zikhuselekile ngokwaneleyo ukuba zisebenzise ngaphakathi. Ngaphakathi kwakho ukuhlala, egumbini.
Inkampani emva kwabo ithi a) ayiyi kuphula iifestile; okanye b) ushiye iimpawu zokurhweba kwiindonga okanye kwifenitshala. Kwakhona, inkampani ithi, ayiyi kubonakalisa imoto okanye ukuhlala ekhaya.
Banobunzi be-polym condensed condensation kunye noxinzelelo lwangaphakathi ukuvelisa i-clubface. Unomzekelo onobuhle kwaye unomlinganiselo wesantya ukuba yiyiphi iibhola zegalufa ezilikhulu. Zihamba, ngoko uzonokuzifumana ezivela emanzini; kwaye zakhiwa ukujamelana nokuqhaqhaqhaqha okanye ukuphazamisa kwiinyanga zokusetyenziswa.
Iibhola ze-Sci-Core zokuqhuba zithengiswa kwiimpahla ze-pack-6 zithengwa kwi-website ye-website, swingcoachclub.com.
I-elixir yindlela yokusebenzisa imilingo, okanye i-substance i-alchemists esetyenziselwa ukuguqula ezinye izinto zenziwe ngegolide. I-ELIXR ibhola legalufa elitsha kwi-OnCore.
Enyanisweni, i-OnCore ELIXR yiyona "ibhola yokutyelela" yokuqala yenkampani, ibhola ye-top-line yenkampani yegolfu engcono okanye nayiphi na igrafu efuna ukulawula nokuziva. Iingqimba ezintathu kwibhola ziyi-corebutadiene yerbra core, i-ionomber ingubo yensimbi kwaye ikhuphe i-urethane cover. Ukulinganiswa koxinzelelo ku-85.
Iibhola ze-ELIXR zibhalwe kwi-40 kwi-website nganye kwiwebsite yenkampani.
I-Srixon Z-Star kunye ne-Z-Star XV
Iimpawu ze-2017 ze-Srixon's Z-Star umgca weebhola zegalufa. Srixon
I-Slixon's Z-Star Series yeebhola zegalufa zifaka isizukulwana sayo sesihlanu ngokusungulwa kohlobo lwe-2017. Le mizekelo emibini - i-Z-Star kunye ne-Z-Star XV - "yintsebenzo yokutyelela" iibhola, ezibhekisela kwiibhola eziphakamileyo ezijoliswe kwiigolisa ezinezakhono.
Ukuqhathaniswa nokulandelelana kwangaphambili kwebhodi ye-Z-Star, iSrixon ithi ukuphucula kunye nokulungiswa kwemifanekiso kwiimodeli ezintsha zijoliswe ekuphuculeni ukuvakalelwa kunye nokusebenza ngokubeka amanqaku emifanekiso (iindlela ezimfutshane kunye nezibhengezo eziluhlaza ngokubhekiselele kwi-greenside) - ngokuthe ngenye indlela).
Ezi zombini iibhola zineempawu eziphambili ezikhethiweyo ezikhethwe ngabagadi begolfu abangcono, ukuqaliswa okuphambili okufumana ukugqithiswa okukhulu xa kuqhathaniswa neebhola eziphambili.
Ulwahlulo oluphambili phakathi kweBraxon Z-Star ibhola ye-2017?
I-Z-Star inikeza umgama kwaye uzive kodwa ugxininise kwi-greenside spin kunye nokulawula.
I-Z-Star XV inikeza ulawulo lwe-greenside kwaye uzive ngokugxila kumgama.
Ezi zombini iibhola ziyafumaneka eNyakatho Melika ngomhla kaFebruwari 17, 2017, kunye nePART ze $ 39.99 nganye. srixon.com
Ingaba umntwana wam i-skateboarder ufuna ngempela zonke izixhobo?
Indlela yokugcina iGear Dry kwiCanoe
Iiklabhu zeGraor Junior: Iingcebiso kubazali ekuthengeni i-Right Set Set
I-Ping G2 Umqhubi: Owokuqala (kwaye Uphi Ukuwufumana Ngoku)
Isikhokelo soMthengi weeMidlalo
Ukukhetha ii-Skateboards ze-Kids
Yintoni ozogqoka xa usuka kwi-Skiing
Ukuhlaziywa kweStel Skates
Indlela yokuchonga nokweyisa iingxaki ze-skateboarding kubantu abaninzi
Amakhwenkethi aphezulu aBantu abafana
I-Callaway yeGolta enkulu yeBertha Fusion Irons Setha
USMMA GPA, SAT kunye ne-ACT Data
Ukuhlasela kweNgilani: iMfazwe yaseHastings
Ukukhumbula uG Gus Grissom: NASA Astronaut
I-Biography ka-Alvaro Obregón Salido
Oyingcolileyo oMninimzi ngo-2000 woMongameli woMongameli wase-US
Iintlanzi ezilishumi eziphezulu zeTantra
Ukutshintsha idilesi yakho yepostile Online
I-Prim Primer 7: Ibhola leMoya Vs. Qha ga mshelwano
Imithi e-10 ephezulu yeYard encinci
Imfazwe Yehlabathi I: USS Wyoming (BB-32)
I-Iran Election Cartoons
Uhlobo lwe-ABEC lukuxelela ntoni malunga neenqwelo ze-Skateboard Bearings
Imibono yamaSulumane kunye neZenzo malunga nokuThatyathwa
Yiyiphi i-Good Score ye-PSAT?
Uyakuqonda njani izikolo ze-SAT kwiiKholeji zeeKholeji zeeKholeji
Imbali yeBamiyan Buddha
Iincwadi eziLungelekileyo zokuFunda-ziValiwe zabaFundi abaQalayo
Ngaphambi kokuba Uvumelane nokubhalwa kweNcwadana yesiThotyana yeSicelo seNqununu
Imbali yoQeqesho lwaseMzantsi Afrika
Imbali Yamfihlakalo: Iziganeko eMelika
Iqela lebhola lebhola le-Basketball Sebenzisa i-Isolation Play Play Points
Isiqulatho sesishwankathelo se-Episodes kunye neStasima ye "Oedipus Tyrannos," nguSophocles.